6 Waxyaabood Waa Inaad Ka Ogaataa Ninka Kahor Intaadan Siinin Qalbigaaga - Aayaha
Mararka qaar qalbigaaga ayaa halis ku gelin kara haddii aadan taxadarin, Qaladaad badan oo haweenku sameeyaan ayaa ah inay qalbiyadooda iska siiyaan nin aysan si wanaagsan u baran min biloow illaa dhammaad.
Nin ayaad la kulmee jacayl ayaad u qaadee dabadeed sariir ayaad la seexaneysaa adigoo siinaya noloshaada iyo qalbigaaga.
Inaad qof jeclaatid waa arrin wanaagsan balse waa inaad ogaataa waxa uu yahay qofka aad qalbigaaga siineysid.
6 Waxyaabood oo muhiim ay tahay inaad ogaatid kahor intaadan qalbigaaga nin siinin.
Miyuu si dhab ah kuu jecelyahay?
Waa meeshaan halka haween badan ay qalad ku galaan kaasoo ugu dambeeyn u keena murugo. Xaqiiqda ah inaad jeceshahay kama dhigna inuu isagana ku jecelyahay si lamid ah sida aad u jeceshahay. Waxaa lagaa rabaa inaad ogaatid dareenkiisa ku aadan adiga iyo haddii uu si dhab ah kuu rabo, haddii waxaad ku dambeyn doontaa niyad jab iyo shalaay.
Ma naago badanyahay?
Mararka qaar inuu ku jecelyahay wali waxbaa ka dhiman; ma u adkeysan kartaa inuu kula jeclaado ama ay kula qeybsadaan tobanaan haween oo kale? Dhab ahaantii jawaabtu waa maya! Iska xaqiiji inuusan ahayn nin haween badan isla markaana aadan kamid noqon mid kamid ah haweenkaas.
Xiriirka uu la leeyahay qoyskiisa
Waxaad maleyn kartaa inaysan muhiim ahayn tan balse waa mid ahmiyad leh. Miyuu qoyskiisa kula dhaqmaa jacayl iyo xushmad? Miyuu qiimeeyaa? Jawaabaha kasoo baxa su’aalahan ayaa kuu sheegi kara nooca uu yahay ninka.
Haween farabadan ayaa guursaday rag dambiyo waaweyn galay iyagoo aanan ka warheyn. Waa inaad ogaataa diiwaanka dambiyadiisa, waa inaad iska xaqiijisaa kahor intaadan siin qalbigaaga haddii kale laftirkaaga ayaa halis lugaha la galaya.
Daacad ma yahay?
Inaad qof siiso qalbigaaga waa halis weyn oo aad u bareereyso. Kahor intaadan qalbigaaga siinin nin, waa inaad ogaataa haddii aad ku kalsoonaan karto. Haddii uusan daacad ahayn xiriirkaas halis ayuu ku gelinayaa, inaad niyad jabto ma ahan xaalad aad dooneysid inaad gasho.
Siduu uga fal celiyaa markaad ku jirtid xaalad xun?
Habka ugu wanaagsan ee aad nin ku ogaan karto ayaa ah markaad ku jirto xaalad xun. Ma yahay mid aanan wax dan ah siineyn? Miyuu yahay mid naftiisa kaliya ka fekera? Haddii ay haa tahay jawaabta ka fogoow balse haddii uu dhibka kula qeybsado dabadeed waa nin wanaagsan.
Previous articleSaddex Waxyaabood Mar Waliba Ku Amaan Seygaaga/Xaaskaaga
Next articleDaraasad soo bandhigtay hal arrin oo lamaaneyaasha shaqooyinka guriga isla qabta ay dheeryihiin kuwa kale
Sida Loogu Guuleysto Kulanka Ugu Horeeya Ee Haasaawaha
Aayaha editor - February 17, 2020 0
Inaad si wanaagsan isku diyaariso kulanka ugu horeeya ee haasaawaha waa arrin aad muhiim u ah waa mid kaa saacideysa inaad gool kale ku...
Men who drink yoghurt have a lower risk of developing colon...
Signs to look out for in Somali lady ready for committed...
Wax ka ogoow sida ay ku timid maalinta Jacaylka adduunka ee...
3 Arrimood oo kaa caawinaya inaad noqoto haweeney nin walba uu...
5 Waxyaabood Oo Wanaagsan Oo Xiriirka Lamaanaha Hadda U Baahanyahay
Meherkii Ugu Yaabka Badnaa Oo Muqdisho Ka Dhacay: Taabit Iyo Nawaal...